Akudzidzisei munhu mazano mashoma kuti zvakanaka kutora kongiri pombi pasi - China Qingdao CO-NELE Group
Akudzidzisei munhu mazano mashoma kuti zvakanaka kutora kongiri pombi pasi
Kana nenyere twa pasi, kana zvinodiwa kongiri pombi muridzo unoridzirwa riri guru, chesamende zvibudire pasi nokuda yayo uremu ari Mapaipi vachida, zvichikonzera isina iri irikupa nyere kana zvichiita kongiri kuti rusaruro nokuda kuzvipira inoyerera, nokudaro zvichiita irikupa nenyere kuti tsinga. Kuti izvi zvisaitike, zvinotevera matanho anogona kutorwa:
1. Kana kupomba kongiri pasi, vaizviita nokuyerera nekongiri hwakada kufanana ayo slump. Mvura inofanira pumped pamberi kupomba kongiri, tarisa Hudyu nomumwe nyere nechokwadi kuti chisimbiso haaiti mvura seep, uye ipapo kupomba nedhaka kuti tsvedzesa nenyere uye panguva imwecheteyo The mhepo iri pauri.
2. Kana kwakarerekera muridzo unoridzirwa mukuru 4 ° -7 °, munhu chinjikira nyere chaienzanirana kureba kupfuura 5 nguva hunyambiri donhwe inofanira kupiwa pamberi kuguma downwardly kurerekera mutopota, uye vanozviita yerera pamusoro kongiri anogona kudziviswa frictional nemishonga.
Qingdao kongiri pombi rori mutengo (4)
3. Kana nenyere mafungiro mukuru 7 ° -12 °, kuwedzera kune chinjikira nenyere 5 nguva urefu yakatarwa pamberi kuguma mutopota vachida, imwe chiutsi vharafu zvinofanira yatinowana rokumusoro kuguma pasi nenyere. Munguva kupomba muitiro, kana pane mhango ari Mapaipi vachida, kuti chiutsi vharuvhu inofanira kutanga kuzarurwa kusvikira Mapaipi vachida izere kongiri, uye kana chiutsi vharuvhu runofashamira nedhaka, kuti chiutsi vharuvhu kuvharwa uye zvakajairika kupomba rinoitwa .
4. rigone nenyere huru donhwe anogona kuiswa munzvimbo nechepakati vertically rigone nenyere hwokugadza vanorega nyere kuti anoita somunhu akamedura. Pinza wandei zvakaoma chipanji balls kana kuchenesa plugs vasati kupomba nedhaka kudzivisa kurasikirwa dhaka. Vanogona abate kurema dhaka.
5. Kana kukunyimai nzvimbo ezvinhu, apo pasina nzvimbo yakakwana worongedza chinjikira mutopota pamberi kuguma pasi kurerekera mutopota, hosipaipi, kugokora kana annular nepombi anogona kushandiswa pachinzvimbo kuwedzera frictional kurwisa uye kudzivisa kongiri kubva kuyerera pasi ari mutopota muchikamu.
Qingdao kongiri pombi rori mutengo (6)
Zvisinei, pasinei chesamende pombi zvakabatana kumusoro kana downwards, kuti chinjikira kutendeuka kureba zvakasiyana pombi, muna chaiwo muridzo unoridzirwa, nokuda zvakasiyana siyana, nhamba uye kwakaita nzvimbo yacho yose pombi, chaiko irikupa kure uye kukwirira zvakare zvakasiyana, izvo zviri nyore kuti kuverenga. Kutsiva conical chubhu, kugokora, hosipaipi, kumusoro wehunyambiri chubhu, pasi wehunyambiri chubhu, etc. kupinda chinjikira kureba. Panguva iyoyowo, iyo chinjikira chizvidavirire ukoshi iri chokuita kongiri unhu, nenyere dhayamita uye zvichingodaro.
Post nguva: Nov-21-2019
Hunhu Hwekuvaka hweKonkrete ...
Maitiro ekugadzirisa sei kubirira kweiyo inlet ye ...